“နေ၀င်စရယ်က ရောင်စုံခြယ်” (ဓါတ်ပုံပိုစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “နေ၀င်စရယ်က ရောင်စုံခြယ်” (ဓါတ်ပုံပိုစ်)	8
“နေ၀င်စရယ်က ရောင်စုံခြယ်” (ဓါတ်ပုံပိုစ်)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 9, 2015 in Photography | 8 comments
တစ်ခါတစ်လေ တစ်နေကုန် တဖွဲဖွဲ။
အလုပ်ဖွင့်တဲ့ရက် မှာတော့ သိပ်ပြဿနာမရှိ။
အလုပ် လုပ်နေရင်းက အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားတတ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဥပုဒ်နေ့ ကတော့ မိုးက ဖွဲဖွဲလေးကျလိုက်တိတ်လိုက်နဲ့။
ညနေပိုင်းတော့ မိုးရိပ်ရှိပေမယ့် မိုးကမရွာပါဘူး။
ဒါနဲ့ဘဲအညောင်းပြောဆိုပြီး မြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ကစားကွင်းဘက်ကို လမ်းလျှောက်ဘို့သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေရာက သစ်တောပင်အစုလေးတွေနဲ့ အုတ်ခင်းလမ်းတဲ့ဆိုတော့ ညနေခင်းမှာလမ်းလျောက်လာသူတွေအများကြီးပါဘဲ။
အဲဒိနေ့က လမ်းလျောက်မယ်ရည်ရွယ်တော့ ကင်မရာပါမသွားပါဘူး။
ကင်မရာမပါ မှ လှလိုက်တဲ့ နေ၀င်ဆည်းဆာ။
1 ပန်းခြံထဲသို့ အ၀င်
4 သံသရာ စက်ဝန်း
6 ခုန် ခုန် ခုန်
အောင် မိုးသူ says: တိမ်တောက်ရင် အရမ်းသဘောကျတာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တိမ်တောက်ချိန်ကတော့ ကမ္ဘာလောကကြိးရဲ့အလှဆုံးအချိန်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
Mike says: .နေညိုချိန်တိမ်တောက်တဲ့အခါ…တရုတ်ကြီးအနားမှာ..စာဥတို့သူငယ်ချင်းမတွေ အလုပ်ဆင်းလို့လာ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုမိုက်ရေ ပြီးခဲ့တဲ့ဝါဆိုလပြည့်နေက ရွှေလီတံတားပေါ်မှာ မြန်မာတွေ ရှမ်းတွေ အပြည့်ဘဲ။.
အဲဒီတော့ မှ ဒီ တရုပ်ပြည်နယ်စပ်မြို့လေးမှာ မြန်မာတွေအလုပ် လာလုပ်တယ် အများကြိးဆိုတာ သိလိုက်တယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ပေမယ့် တံတားပေါ်လူရှုပ်တော့ ရပ်မရလို့မှတ်တမ်းမတင်လိုက်ရဘူး။
manawphyulay says: ညနေခင်း လေပြေထဲမှာ…. မင်း ဆံပင်တွေ ….
အဲ မှားလို့… နေ၀င်ချိန် ငှက်ကလေးတွေအိပ်တန်းတက်ချိန်ကို အရမ်းသဘောအကျဆုံးပါပဲ….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နေ၀င်ချိန်တွေဆိုကိုယ်လွမ်းမယ်
Alinsett @ Maung Thura says: သစ်ပင်တွေကို ရိုက်ပြတာ… ပိုစိတ်ဝင်စားမိ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သစ်ပင် တွေက လဲ တမျိုးလှ
တိမ်တွေက ပို လှ တယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း